Ifulethi lase-Athens elihlanzekile nelinethezekile eliseduze ne-Metro Stop - I-Airbnb
Ifulethi lase-Athens elihlanzekile nelinethezekile eliseduze ne-Metro Stop
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Vicky
U-Vicky Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elisanda kulungiswa elitholakala kalula enhliziyweni ye-Athens. Igqugquzelwe uthando lwe-Mid Century Design, yonke imininingwane kuleli khaya ikhethwe ngokucophelela ukuze inikeze ukubukeka kwe-retro nakho konke okulula kwesimanje. Ukuhamba imizuzu emi-3 kuphela ukuya esiteshini esiseduze sikamasipala kanye nezindawo ezi-4 zokuma kude ne-Monastiraki Sq, uzokwazi ukufinyelela kalula kuzo zonke izindawo ezikhangayo okufanele uzibone e-Athene.
Leli yipulani eliphansi elikhululekile, ifulethi elisanda kulungiswa elinovulandi obheke phambili, igumbi lokulala elikhulu, indawo yokudlela ehlanganiswe negumbi lokuhlala nekhishi, kanye negumbi lokugezela, elilungele izivakashi ezimbili noma ezifika kwezintathu.
4.99 · 123 okushiwo abanye
Le ndawo igcwele izinto eziwusizo zansuku zonke njengezimakethe ezinkulu, izindawo zokudlela, izitolo zekhofi, amakhemisi, amabhikawozi kanye nezindawo zokudla, nezimakethe zabalimi zamasonto onke.
Ngizotholakala 24/7 ngocingo nange-imeyili.
Inombolo yepholisi: 00001002221
Hlola ezinye izinketho ezise- Athina namaphethelo